DAAWO:- Ma dhab baa in Maanta ay hakad galeen Dhamaan Duulimaadyadii garoomada Puntland? “Wasiir ayaa kahadlaya”. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada dowladda Puntland, Ilyaas Cusmaan Lugatoor (Gabiley), ayaa beeniyay warar lagu qoray baraha bulshada oo sheegayay, in dhammaan duullimaadyadii imaan jiray Puntland la joojiyay, kadib markii ay saameyn ku yeesheen roobabka dabaylaha wata.
“ Runtii, waxba kama jiraan Duullimaadyada Garoomadeenna iyo Hawadeennu waa caadi, saakana Air-boodhada diyaaraduhu way ka dageen. Subaxnimadii wax Air-boodh aan diyaaradihii tegi jiray ka wareejinay, waxaa jiray Air-boodhka Qardho oo roobabkii darted aan u wareejinnay Boosaaso.” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiirka ayaa xaqiijiyay, in saaka hal diyaarad oo ka degi lahayd Garoonka magaalada Qardho, loo wareejiyay dhinaca Garoonka Boosaaso, kadib markii uu roobku saamayn ku yeeshay, maadaama Garoonka Qardho uusan laami ahayn oo jileec laga dareemay.
Mudane Gebilay, ayaa sidoo kale sheegay in Sabtida maanta ah Garoonka Diyaaradaha Garoowe, ay si caadiya Duullimaadyadu uga socdeen, wixii ka horreeyay 11:00 Am, balse ay gelinkii dambe hakad yar uu ku yimid Duullimaadyaaasi, kadib markii roobku sii xoogaystay.
Previous articleDAAWO:- Puntland oo si guud uga hadashay Khasaarihii ka dhashay Roobabkii ka da’ay 9keeda Gobol “Burbur badan ayaa jira”.
Next articleDAAWO:- Sheikh Bashiir Axmed Salaad oo sheegay in la aqbalay Towbad keenkii CCWarsame + Fariin ku wajahan Culimada.